Mr Robot - Season2( Episode 00 - 012 ) 2016 | Myanmar Black Hacking
1 Mr Robot - Season2( Episode 00 - 012 ) 2016
2016 ခုနှစ်ရဲ့ နာမည်ကြီး ဟက်ကာဇာတ်ကားအကြောင်း Mr Robot ( Season2) ဇာတ်လမ်းတွဲလေးထွက်ရှိပြီးသလောက်ထိ ထပ်မံတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ . တကယ်လက်တွေ့ မှာ ဟက်ကာတွေသုံးနေကြတဲ့ Exploit / Social / Kali Os တွေကို သုံးထားပြီးတော့ ဟက်ကာတစ်ယောက်ရဲ့တကယ့်စရိုက် ဗီဇ နေထိုင်မှု အမူအကျင့်တွေ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ထုတ်ဖော်ပြသထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ
လက်ရှိမှာလည်း IDM rating 8++ ထိ ရရှိနေတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုပါ
နည်းပညာလောကနဲ့ မကင်းသူတိုင်းအတွက် ပညာပေးဇာတ်ကားလို့ ပြောလို့ လည်းရပါတယ် ဒီ Season2ထွက်ပြီးသလောက်ထိ ကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်
The premiere will pick up 30 days after the now infamous fsociety 5/9 hack on multi-national company Evil Corp. Season2will explore the consequences of that attack as well as the illusion of control
Actor: Rami Malek, Christian Slater, Portia Doubleday
Duration: 49 min +++
Download / Watch Here ဒီကနေသွားပါ
Labels: Knowledge . Videos
down မရဘူး ပြန်တင်ပေးပါလား ခင်ဗျ
Aug 26, 2018, 7:16:00 AM